အဖွူနှငျ့ အပွာကို တှဲဖကျ၍ အလှဆငျထားသော အိမျအခနျး ပုံစံ ၅ မြိုး - Myanmar Builders Guide
အပွာသညျ အေးဆေးတညျငွိမျသော သဘောရှိ၍ အဖွူသညျ သနျ့ရှငျးသပျရပျသော သဘောရှိရာ အပွာနှငျ့ အဖွူကို ပေါငျးစပျလိုကျသောအခါ ခတျေမီဆနျးပွားပွီး အထူးခွားဆုံး ဖွဈစသေညျ။
ဟောငျကောငျ Fiona Kotur ရှိ အိပျခနျးတဈခနျးတှငျ Eero Aarnio ပူဖောငျးကုလားထိုငျကို ခြိတျဆှဲထားတဲ့ ပုံစံမြိူးပါ။ အနောကျက နံရံကပျစက်ကူဟာလညျး အလနျးပါနျော။
2. AddaClassic Stripe
Miles Redd မှ အလှဆငျထားသော Bahamas ရဲ့ အားလပျရကျမှာ အနားယူတဲ့အိမျရဲ့ စင်ျကွံဖွဈပါတယျ။ Benjamin Moore အပွာရောငျ ဆေးသုတျထားပွီး နံရံမှာ စှနျပလှံပငျမြားနှငျ့ တနျးစီထားပါတယျ။ ကောဇျောကို အစငျးကွောငျးပုံစံခြုပျထားတာဟာ ရိုးရှငျးပွီးတော့ လှပနပေါတယျ။
3. Choose Coordinating Wallpaper and Fabrics
ဒီဇိုငျနာ Friederike Kemp Biggs ရဲ့ New York City penthouse ထမငျးစားခနျးကို chinoiserie နံရံကပျစက်ကူဖွငျ့ အလှဆငျထားတာပါ။ နောကျက နံရံနဲ့ ခုံအစရှိသညျ့ အခွားသော အပွငျအဆငျတှေ လိုကျဖကျညီ၍ လှပလှနျးပါတယျ။
4. Add Chinoiserie Accents
Carolina တောငျပိုငျးရှိ Charleston ၏ ရခြေိုးခနျးကို Mario Buatta က အလှဆငျပေးထားတာပါ။
5. CreateaMod Look
California သဲကန်တာရ ရှိ အိမျတျောအတှငျးကို
Emily Summers က ဒီဇိုငျးဖျောပေးထားတာပါ။ နံရံကို coveringlitis ဖွငျ့ ဖုံးအပျထားတာကတော့ ထူးခွားခကျြပါ။
အဖြူနှင့် အပြာကို တွဲဖက်၍ အလှဆင်ထားသော အိမ်အခန်း ပုံစံ ၅ မျိုး
အပြာသည် အေးဆေးတည်ငြိမ်သော သဘောရှိ၍ အဖြူသည် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော သဘောရှိရာ အပြာနှင့် အဖြူကို ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ ခေတ်မီဆန်းပြားပြီး အထူးခြားဆုံး ဖြစ်စေသည်။
ဟောင်ကောင် Fiona Kotur ရှိ အိပ်ခန်းတစ်ခန်းတွင် Eero Aarnio ပူဖောင်းကုလားထိုင်ကို ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ပုံစံမျိူးပါ။ အနောက်က နံရံကပ်စက္ကူဟာလည်း အလန်းပါနော်။
Miles Redd မှ အလှဆင်ထားသော Bahamas ရဲ့ အားလပ်ရက်မှာ အနားယူတဲ့အိမ်ရဲ့ စင်္ကြံဖြစ်ပါတယ်။ Benjamin Moore အပြာရောင် ဆေးသုတ်ထားပြီး နံရံမှာ စွန်ပလွံပင်များနှင့် တန်းစီထားပါတယ်။ ကောဇော်ကို အစင်းကြောင်းပုံစံချုပ်ထားတာဟာ ရိုးရှင်းပြီးတော့ လှပနေပါတယ်။
ဒီဇိုင်နာ Friederike Kemp Biggs ရဲ့ New York City penthouse ထမင်းစားခန်းကို chinoiserie နံရံကပ်စက္ကူဖြင့် အလှဆင်ထားတာပါ။ နောက်က နံရံနဲ့ ခုံအစရှိသည့် အခြားသော အပြင်အဆင်တွေ လိုက်ဖက်ညီ၍ လှပလွန်းပါတယ်။
Carolina တောင်ပိုင်းရှိ Charleston ၏ ရေချိုးခန်းကို Mario Buatta က အလှဆင်ပေးထားတာပါ။
California သဲကန္တာရ ရှိ အိမ်တော်အတွင်းကို
Emily Summers က ဒီဇိုင်းဖော်ပေးထားတာပါ။ နံရံကို coveringlitis ဖြင့် ဖုံးအပ်ထားတာကတော့ ထူးခြားချက်ပါ။
Read 592 times	Last modified on Monday, 03 February 2020 16:50